WALAAC: Chelsea Oo Ka Walaacsan Xaaladda Laacib Muhiim U Ah Oo Markii SADDEXAAD Ay Barcelona Usoo Bandhigtay Heshiis - Cadalool.com
WALAAC: Chelsea Oo Ka Walaacsan Xaaladda Laacib Muhiim U Ah Oo Markii SADDEXAAD Ay Barcelona Usoo Bandhigtay Heshiis
Kooxda kubadda Cagta Chelsea ayuu soo food-saaray walaac hor leh kaddib markii ay Barcelona markii saddexaad kusoo laabatay xiddig muhiim ah Blues oo aanay ka maarmi karaynin.
Tababare Maurizio Sarri ayaa laacibka ay Barcelona raadinayso ciyaarsiiyey 49 kulan dhamaan tartamada xili ciyaareedkan, waxaana uu u dhaliyey siddeed gool iyo 14 uu caawiye ka noqday, waana sababta ay ugu adag tahay inay ogolaadaan inay arkaan isaga oo kasii baxaya albaabka.
Blues oo aan wali natiijo rasmi ah ka helin rafcaanka ay ka qaadatay xayiraadda suuqa ee lagu soo rogay, ayaa waxay la dhibaatoonaysaa sidii ay dabar ugu xidhi lahayd xiddigaheeda u hanqal-taagaya kooxaha kale, waxaana iyadoo markii horeba khaati ka taagnayd wararka isku xidhiidhinaya Real Madrid iyo Eden Hazard, haddana madax-xanuun kale ku ah in kooxda reer Catalonia ay mar kale kusoo laabatay 30 jirka orodka badan ee culayska ka dajiya weeraryahannada.
Sida uu qoray wargeyska The Telegraph, Barcelona oo laba jeer oo hore ku guul-darraysatay inay hesho laacibka reer Brazil ee Willian, ayaa waxay markan soo diyaarsatay qorshihii ay qaabka afduubka ah ugu kaxaysan lahayd ee uu safkeeda xili ciyaareedka dambe qaybta uga noqon lahaa.
Xagaagii tegay, Chelsea ayaa waxay u sheegtay Barcelona inay bixiso £55 milyan oo Gini haddii ay doonayso inay hesho Willian, laakiin waqtigan ma ogolaan doonto inay dhayal ku fasaxdo, waxaanay samayn doontaa wax kasta oo suurtogal ah oo ay ku ilaashanayso xiddigaheeda waaweyn haddii xayiraadda suuqa laga qaadi waayo.
Sida ay qortay warbaahinta BBC Sports, Chelsea ayaa waxay hore ugu diyaarsatay beddelka Willian laacibka khadka dhexe uga ciyaara Borussia Dortmund ee Christian Pulisic oo ay £58 milyan oo Gini ku iibsatay bishii January, soona gaadhi doona Stamford Bridge bisha June.
BBC Sports waxa kale oo ay xustay in haddii laga qaado xayiraadda ay Blues dhegaysan doonto dalabyada ka imanaya Barcelona, laakiin ay albaab kasta xidhan doonto haddii suuqu mamnuuc kasii ahaado.
Ka sokow walaaca ay Chelsea ka qabto Willian, waxa kale oo dawakhaad ku haya labada ciyaartoy ee Eden Hazard iyo Callum Hudson-Odoi oo diiddan inay heshiis cusub saxeexaan, dhamaadna uu ku dhow yahay qandaraaskoodii hore.
Si kastaba ha ahaatee, bishan April ayay Blues filaysaa inay war kama dambays ah ka hesho rafcaanka ay ka qaadatay xayiraadda lagu soo rogay.